“Waxaan rajeynayaa inaan markale arko Messi iyo Neymar oo iska garab ciyaaraya… laakiin ma ahan Barcelona!” – Gool FM
“Waxaan rajeynayaa inaan markale arko Messi iyo Neymar oo iska garab ciyaaraya… laakiin ma ahan Barcelona!”
(Yurub) 09 Abriil 2021. Qandaraaska Messi ee kooxda Barcelona ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, mana jiraan wali wax wada hadal ah ee u socda labada dhinac ee ku saabsan heshiis kordhint, waxaana jira warar la xiriirinaya inuu ka tagi karo garoonka Camp Nou si uu ugu biiro kooxo ay ka mid yihiin PSG iyo Man City.
Haddaba tababaraha halyeeyga ah ee reer Brazil Luiz Felipe Scolari ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu arko laacibka ay isku wadanka yihiin ee Neymar oo markale ka garab ciyaaraya Lionel Messi, laakiin ma ahan Barcelona.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa daabacay hadalada Luiz Felipe Scolari, kaddib wareysi uu bixiyay, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko iyaga oo wada jira, laakiin ma ahan Barcelona, ​​waxaan rabaa inay noqoto Paris Saint-Germain.”
“Waxay sameysanayaan ​​labo xidig oo ay adagtahay kooxaha kale inay helaan, ma jiri doono kulan aysan Paris Saint-Germain goolal dhalin doonin. Neymar iyo Messi waa kuwo caqli badan.”
Scolari, oo u horseeday Brazil inay ku guuleysato Koobkii Adduunka ee 2002, ayaa shaaca ka qaaday rabitaankiisa aan la fulinin ee ah inuu tababare u noqdo Messi xirfadiisa tababarenimo, wuxuuna yiri:
“Wax badan ayey ka beddeli laheyd xirfadayda tababaranimo, tababarka Messi wuxuu i siin lahaa farxad ka sii badan dhamaan koobabkii aan ku helay xirfadeyda tababarnimo.”
Maxaa ka soo kordhay mustaqbalka Haaland & wararka la xiriirinaya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona?